चर्चामा रहेका १० कोरियन ब्यान्डहरु « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
चर्चामा रहेका १० कोरियन ब्यान्डहरु
काठमाडौं, १० वैशाख । पछिल्लो समय दक्षिण कोरीयाली टेलिसिरियल र गीत संगितले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रो पकड बनाएको छ । सन् २०१२ मा गायक साईको ग्याङनाम स्टाईल बोलको गित युटुबमा भाईरल भएपछि कोरीयन संगीतले अन्र्तराष्ट्रिय सांगितिक बजारमा राम्रो उपस्थिती जनाउँदै आएको छ । अहिले चर्चामा रहेका १० कोरीयाली सांगितिक बोई ब्यान्डहरु यी हुन्-
1. बिटिएस (BTS)
2. वाना वान (Wanna One)
3. एक्स ओ (EXO)
4. बि टब (BTOB)
5. जेबिजे (JBJ)
6. सेभेन्टिन (SEVENTEEN)
7. सुपर जुनियर (Super Junior)
8. हाईलाइट (Highlight)
9. साईनी (SHINee)
10. इन्फिनेट (INFINITE)
उललिम इन्टरटेनमेन्टले सन् २०१० मा इन्फिनेट ब्यान्ड बनाएको थियो । यो ब्यान्डको सुरुवातमा सात जना सदस्य थिए । तर ब्यान्ड सदस्य होयाले ब्यान्ड छोडेपछि अहिले यसमा ६ जना सदस्य (सुनक्यू, सुनयोल, एल, सुनजुन, दोङउ, वोह्यून) छन् । उनीहरुले सन् २०१० मा ‘कम ब्याक अगेन’ बोलको गित बाट डेब्यू गरेका थिए । यो ब्यान्ड डान्स मुभको लागि प्रख्यात छ । उनीहरुको बी माईन, प्याराडाईज, बीटिडी लगायतका गित चर्चित छ ।
साईनी, एस.एम इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको ब्यान्ड हो । सुरुवातमा पाँच सदस्य रहेको यो ब्यान्डमा मेन भोकलिष्ट जोनह्युनले सन् २०१७ मा ब्यान्ड छोडेपछि चार जना (ओनिउ, ताईमिन, मिन्हो, के) सदस्य छन् । उनीहरुले सन् २०१८ मा ‘रि प्ले’ बोलको गीतबाट डेब्यु गरेका थिए । यो गित त्यसबेला निकै चर्चित बनेको थियो, यसले उनीहरुलाई स्थापित गराईदियो । त्यसपछि क्रमस निस्केका जुलियट, लुसिफर बोलको गित पनि हिट बन्यो । यसले उनीहरुलाई डेब्यू गरेदेखि निरन्तर ३ वटा रिलिज गरिएको गितमा निरन्तर टप ३ मा पर्न सफल नयाँ आर्टिस्टको टाईटल मिलेको थियो । साईनीलाई विशेष गरी फेसन र कमप्लीकेटेड डान्स मुभको लागि चिनिन्छ ।
हाईलाइट पनि कोरियन चर्चित ब्यान्ड हो । हाईलाइट नामाकरण हुन अघि यो ब्यान्डलाई बिस्ट् अथवा बी.टु.एस.टी (BEAST/B2ST) नामले चिनिन्थ्यो । बिस्ट्लाई सन् २००९ मा क्युब इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको थियो । पछि सन् २०१६ मा गएर यस ब्यान्डका सदस्यहरु मिलेर आफ्नै एजेन्सी अराउन्ड अस इन्टरटेनमेन्ट(Around us entertainment) खोले र ब्यान्डको नाम हाईलाईट राखे । यसमा पाँच सदस्य छन् -डोजुन, जुनह्यून, योस्योप, गिवाङ, दोङउन । यो ब्यान्डका सबै सदस्यहरु भिन्न भिन्न एजेन्सीबाट आएका छन् , त्यसैले उनीहरुलाई यूनिक ब्यान्डको दर्जा दिईन्छ ।
सुपर जुनियरलाई छोटकरीमा एस.जे अथवा एस.यू .जे.यू(SJ/SUJU) नामले चिनिन्छ । यो ब्यान्डलाई एस.एम इन्टरटेनमेन्टको प्रोड्युसर ली सोम्यानले निर्माण गरेका थिए । सुपर जुनियर चर्चाको शिखरमा हुँदा ब्यान्ड तेह्र सदस्यको थियो । अहिले यसमा सात सदस्य छन् -लीटुक, सीवन, हिचुल, इनह्युक, इसुङ, सिनदोङ, दोङहाई। जुनियरको ‘सरी सरी’ बोलको गीतले उनीहरुलाई अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा परिचय दिलाएको थियो । करिअरको शिखरमा रहँदा सुपर जुनियर चार वर्षभन्दा बढि लगातार ‘बेष्ट सेलिङ के पप आर्टिस्ट’ बनेका थिए । अहिले यसका सदस्यहरु विभिन्न क्षेत्रमा छन् ।
सेभेन्टिन ब्यान्डमा तेह्र जना सदस्य छन् -जिओनहान, जोसह्वा, जुन, डि.के, मिनग्यू, दि.एट, सूनक्वान, होस्ही, वोनवो, वोजी, एस.कूप, र्भनन्, डिनो । सुरुवातमा यसका सोह्र सदस्य थिए । सेभेन्टिनले ब्यान्डका सदस्यले ब्यान्डमा आबद्ध हुँदाखेरीको उमेरलाई इंकित गर्छ । यसका सदस्यलाई तीन समुहमा वर्गिकरण गरिएको छ- हिपअप, भोकल र डान्स । ब्यान्डका सदस्यले आफ्नै समुह अनुसार आफ्नो पर्फमेन्स् दिन्छन् । उनीहरुको कोरियोग्राफी, भोकल लगायतका विषयहरु आफैले संयोजन गर्छन् ।
जेबिजे ‘जस्ट बी जोयफुल’को छोटकरी रुप हो । फ्याब इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको यो ब्यान्डमा ६ सदस्य छन् -ताई ह्यून, केन्ता, किम साङ ग्युन, किम योङ गुक, क्वोनह्यून विन, किम दोन हान । यसका सबै सदस्यहरु सन् २०१७ मा टेलिभिजनमा प्रसारण भएको रियालीटी कार्यक्रम प्रोड्युस 101 सिजन2का प्रतिस्पर्धीहरु हुन् । यो कार्यक्रममार्फत ५१ भिन्न इन्टरटेनमेन्ट एजेन्सीका १०१ प्रतिस्पर्धीहरुमार्फत ११ जना ब्यान्ड सदस्य चुनिन्छ । ब्यान्ड सदस्य, ब्यान्डको कन्सेप्ट र ब्यान्डको नाम पनि दर्शकले नै छनौट गर्छन् । त्यसै अनुरुप प्रशंसकहरुले ब्यान्ड बनाउन आग्रह गरेपछि उनीहरुलाई समेटेर ब्यान्ड बनाईएको हो । सन् २०१७ मा उनीहरुको ‘फेन्टासी’ नामको गीत सार्वजनिक भएको थियो ।
बिटबको पूरा अर्थ हुन्छ ‘वर्न टु विट’ । यसलाई पनि क्यूब इन्टरटेनमेन्टले सन् २०१२ मा निर्माण गरेको थियो । यसका सात सदस्यहरु छन- स्ओ यून वाङ, योक सुन जाई, ली चाङ सुव, ली मिन ह्यूक, पेनिल सिन, इम ह्यून सिक, जुङ इल ह्यून । बिटबले डेब्यू गरेयता सिंगर अफ दी इयर, ब्यालेड अर्वाड, वेष्ट भोकल ग्रुप अर्वाड लगायतका थुप्रै अर्वाडहरु पाएका छन् ।
3. एक्स-ओ (EXO)
एक्स-ओ लाई एस.एम इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको हो । यो ब्यान्ड सन् २०११ मा स्थापना भएको हो । सन् २०१२ मा एक्स-ओले बाह्र सदस्यका साथ डेब्यू गरेका थियो । एक्स-ओका बाह्र सदस्यलाई दुई समुहमा वर्गिकरण गरिएको थियो- एक्स-ओ एम (EXO M) र एक्स-ओ के (EXO K)। एक्स-ओ लाई फोब्र्स म्यागेजिनले सन् २०१४ र २०१५ मा मोस्ट इन्फ्लुएन्टल सेलिब्रेटिको लिष्टमा राखेको थियो । अहिले यसमा नौ जना सदस्य छन् -बेकह्यून् , सूहो, ले, चेन, च्यानयोल, सीहुन, डि.ओ, काई , सिउमिन ।
वाना वान पनि कार्यक्रम प्रोड्यूस 101 सिजन2का प्रतिस्पर्धीहरुलाई सहभागी गराएर बनाईएको ब्यान्ड हो । वानावान सो कार्यक्रममा सहभागी जनाउँदै देखि डान्स र इलेक्ट्रो म्युजिकको लागि चर्चित थियो । अहिले यो ब्यान्ड टुटिसकेको छ र यसका सदस्यहरु सोलो करियर बनाउन अघि बढेका छन् । यसमा एघार जना ब्यान्ड सदस्य थिए ।
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको ब्यान्ड हो बिटिएस । बिटिएसको गत वर्ष सार्वजनिक भएको गित ‘डिएनए’ ले सर्वाधिक चर्चा पाएको थियो । यस्तै बिटिएस सन् २०१७ मा ट्वीटरमा सर्वाधिक रि-ट्वीट र लाईक गरिएको सेलिब्रेटि बन्यो । गत वर्ष नै अमेरिकन म्युजिक अर्वाडमा बिटिएसले प्रस्तुति दियो भने बिलवोर्ड म्यूजिक अर्वाड पनि पायो । बिटिएस ट्वीटरमा फलोअरको संख्या १० मिलीयन पुग्ने पहिलो कोरियन ब्यान्ड बन्यो । बिटिएसमा सात जना सदस्यहरु छन्- आर.एम, जे होप, जिमिन, भी, जीन, सुगा र जूनकुक । बिटिएसको पूरा रुप हो ‘व्याङट्याङ बोईज्’, कोरियाली भाषामा यो शब्दको अर्थ हुन्छ ‘गोलीलाई रोक्न सक्ने केटाहरुको स्काउट ‘। यससंगै बिटिएसले अंग्रेजीमा ‘वियोन्ड दी सिन’ लाई पनि इंकित गर्छ ।